Wararka Maanta: Sabti, Jun 23, 2013-Baladweyne oo si weyn loogu diyaargaroobayo Xusaska Maalmaha Xoriyada Dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti oo Bishan ku beegan
Wararka Maanta- Sabti, Jun 23, 2013
Mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan gaar ahaan kan degmada Baladweyne, saraakiisha ciidamada Jabuuti iyo ururka hormarinta dhalinyarrada gobolka oo iska kaashanaya xuska maalmaha xorriyada Soomaaliya iyo Jabuuti, ayaa ku howlan sidii loo qaban lahaa fantisyo waaweyn maalmahaas qiimo badan u leh labada dal.
Guddoomiyaha ururka hormarinta dhalinyarrada gobolka Hiiraan Max'ed C/llaahi Buuraale Raaxeeye ayaa HOL u sheegay in ay ku howlan yihiin qaban-qaabada iyo diyaar-garoowgga loogu jiro maalmaha xorriyada, isaga oo sheegay in ay u maamuusi doonaan si ka duwan kana heer sareysa sidii loo xusi jiray sanadihii hore.
“Sida aad la soctaa waxaa nagu soo fool leh maalmo qiimo badan u leh labada dal Soomaaliya iyo Jabuuti oo ay ka xorroobeen gumeystihii Ingariiska, Faransiiska iyo Talyaaniga, xuskan waxaa uu noqon doonaa mid ka duwan munaasabadihii sanadihii hore lagu maamuusi jiray,'' ayuu yiri guddoomiyaha ururka hormarinta dhalinyarrada gobolka Hiiraan,'' Max'ed C/llaahi Buraalle Raaxeeye.
Mas'uuliyiinta maamulka degmada Baladweyne ayaa sheegay in ay maalmaha xorriyada ee nagu soo foolka leh ku maamuusi doonaan, Suugaan, Tartamo Isboorti, Hidyo dhaqan, iyo in la weyneyno calanka Jamhuuriyada Soomaaliya.
Sidoo kale, saraakiisha ciidamada Jabuuti ayaa dhinacooda ku howlan qaban-qaabada xuska 27 Juun oo ah waqtigii ay ka xorroobeen gumeystihii Faransiiska, iyadoo magaalda Baladweyne ay ku sugan yihiin ku dhawaad 1000 askari oo ka socda dowladda Jabuuti.
Dhinaca kale, saacadihii aynu soo dhaafnay magaalada Baladweyne waxaa ka jiray howlgalo lagu sugayo amniga oo lagu soo qab qabtay tiro dad ah, iyaga oo sheegay saraakiisha booliiska maamulka gobolka in howlgalkan qeyb ka yahay diyaar garoowga loogu jiro xuska munaasabadaha nagu soo foolka leh si looga hortago falalka amniga ka dhanka ah.